LIISKA NOOCYADA EY SLED-YADA - EEYAHA
Waqtiga Yakutian eeyaha oo jiidaya cirbad - Sawirka waxaa iska leh El Flaum Kennel oo ku yaal Novosibirsk, Russia
Canadian Eskimo Dog (ama Qimmiq)
Eurohound (sawir baa loo baahan yahay)
Mackenzie River Husky (sawir ayaa loo baahan yahay)
Seppala Siberian Sled eey
Shane dheddigga Siberia Husky oo 6 jir ah bidix iyo Marco oo lab ah Alaskan Malamute oo 18 bilood jira dhinaca midig— Labada eeyba waxay ka yimaadeen xarun badbaadin. Waxaan haystaa laba nooc oo kale oo jilicsan oo jilicsan sidoo kale. Labaduba waa kuwo firfircoon, laakiin waxay yeelan karaan oo keliya soo noqnoqda socod gaaban inta lagu guda jiro xagaaga kulul ee Hong Kong. Waxay jecel yihiin jardiinooyinka waddanka xilliga qaboobaha! In kasta oo Marco uu leeyahay shakhsiyad xukun leh eeyaha kale, haddana wuxuu aad ula saaxiib yahay dadka. Shane waa ka xishoodaa shisheeyaha, wuxuu jecel yahay inuu ku ciyaaro dagaal-xarig ah xarigga, wuxuuna bilaabayaa dagaal aad u buuq badan oo lala yeesho Marco inkasta oo uu culeyskeedu laba jeer yahay (25 vs. 42 kg). Marco gebi ahaanba lama tababbarin markii uu yimid 1 sano jir. Waxay qaadatay 3 ilaa 4 bilood in ilbaxnimadiisa la sameeyo, waana u qalantay dadaalkii. Si dhakhso leh ayaan u bartay in uu si fiican uga jawaabo ammaan , iyo liidata si canaanid taasi waxay fure u ahayd inuu horumar sameeyo. '
Bidix ilaa midig:
'Riyadu waa 3 jir sawirkan. Waxay u badan tahay madow (Siberian Husky). Markii aan iibsannay waxay noo sheegeen inay tahay nooc gaar ah oo Siberia Husky ah, oo ah ‘Sport Husky,’ oo ku habboon shaqada adag, sida eeyaha la riixmay. Dabeecaddeedu waxay la mid tahay Laska, laakiin iyadu way ka madax bannaan tahay oo way nooga jeceshahay. Waxay noqon kartaa Alaskan Husky ... '
'Laska oo 10 jir ah waa madow iyo caddaan Siberian Husky ah. Wali wey dhaqmeysaa da 'yar, way ciyaareysaa, mararka qaar waxay isku dayeysaa inay ciyo (waxay doorbideysaa baroor), waana iyadu hogaamiyaha xirmooyinka eeyahayaga.'
'Winnie waa waxyar oo cadaan-madow-iyo-caddaan ah Alaskan Malamute, oo laga yaabo in lagu daro Husky iyo curiyaha ugu da'da yar kooxda. Indhaheeda waa kuwo u gaar ah ... mid bunni ah iyo mid buluug khafiif ah oo leh bar baro ... aad u fiican. Way xoogaa xun tahay, iyadu jecel biyaha , dabaasha iyo 'biyaha qaniinyada.'
'Winnie oo ah cadaan iyo cadaan' Malamute oo jira 4 sano (oo kor ka muuqda sida eey) waa mid aad u xoogan, la jecli karo oo caqli badan. Waxay jeceshahay biyaha, maydhashada, waxayna jeceshahay barafka. Iyadu waa eey waardiye fiican ah waana midka kaliya ee eeydayda difaaci doona gurigeenna. '
'Daisy, cirro Siberia Husky , iyo Riyadeyda, 6-jirkeyga madow iyo caddaan Alaskan Husky . waa kuwo aad u dheereeya, aan daalin oo xoogaa duurjoog ah. Waxay jecel yihiin bisadaha ugaadhsiga, jiirka, shimbiraha iyo xayawaan kasta oo yar oo ay heli karaan! '
'Misty eeygii howlgabka ahaa ee ka fariistay Alaska oo la ciyaarayay Rikki the Siberian Husky.'
Rikki (bidix), a Siberia Husky halkaan lagu muujiyey markay tahay 8 1/2 bilood jir Moose (midig), a Malamute / Husky mix (Alusky) at 5 sano jir
'Misty waa eeygayaga hawlgabka ah ee hawlgabka ah ee ka yimid Alaska halkaan lagu muujiyey isagoo jira 7 sano.
Misty (dhabarka dambe) eeygii howlgabka ahaa ee howlgabka ahaa ee ka yimid Alaska asagoo 7 jir ah, Moose (dhexda) the Malamute / Husky mix (Alusky) at 5 sano jir, Rikki (hore) the Siberia Husky markuu jiro 8 1/2 bilood
Alaskan Husky iyo Siberian Husky
Eeyaha Husky: Sawirada Guryaha La Uruurin Karo
Si aad u aragto liis buuxa oo ay ku jiraan isugeynta booqashada Dhamaan sifooyinka iyo noocyada iskutallaabta
soohdinta collie lo'da isku darka
eeyaha oo u eg egish dejiyeyaal
i tus sawir eey gorgor
7 bilood jir dane weyn
waa maxay retriever dahabi ah iyo poodle mix loo yaqaan